Kordhinta 3 darajo ayaa khatar galin doonta lakabka ozone | Saadaasha Shabakadda
Kordhinta 3-digrii waxay khatar gelin doontaa lakabka ozone
Monica Sanchez | | Saadaalin
Sawir - Puli-sistem.net
Waxaan ku noolnahay adduun halka kororka joogtada ah ee heer kulka uu sababayo dhibaatooyin badan oo adduunka ka jira, sida baraf dhalaalaya iyo kor u kaca heerka badda, abaaraha sii kordhaya, duufaanno waxyeello geysta, laakiin waxaan inta badan ilaawnaa lakabka ozone.
Lakabkan, oo ka bilaabma qiyaastii 15km ilaa 50km oo joog ah, wuxuu aad muhiim ugu yahay ilaalinta caafimaadka. Hadda daraasad ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in diirimaadka 3 darajo ayaa si ba'an u hanjabaya.
La la'aanta lakabka ozone, ama xitaa yarayntiisa, kordhin kara tirada kiisaska kansarka. Tani, oo marka hore u muuqan karta mid fog, ayaa laga yaabaa inaanay illaa iyo hadda. Kordhinta heer kulku waa xaqiiqo dhab ah meeraha oo dhan: Waxaan soo joognay in ka badan 300 bilood oo isku xigxiga taas oo qiimayaashu ka diiwaan gashan yihiin sida caadiga ah.
Iyada oo wasakhda, xaalufinta, iyo sidoo kale isticmaalka waxyaabaha sunta u leh deegaanka, bani'aadamku wuxuu khatar gelinayaa nafsadiisa iyo dhammaan noocyada kale ee nolosha meerahan.
Sida ku xusan daraasadda, oo lagu daabacay joornaalka Isgaarsiinta Dabeecadda, aad ayey muhiim u tahay in talaabooyinka caalamiga ah loo qaado si loo xakameeyo wax soo saarka methane, taas oo dhibaato ba'an ku haysa deegaanka Yurub.
Qorayaasha daraasadda, oo ay ku jiraan Audrey Fortems-Cheiney oo ka tirsan machadka Faransiiska ee Pierre Simon Laplace, waxay isticmaaleen qaab gaadiid kiimiko ah si ay u baaraan waxa ku dhici doona ozone haddii heerkulka 2 ama 3 darajo ka sarreeya lagu gaaro xaalado kala duwan arrimo yareynaya.
Sidaa darteed, waxay awoodeen inay u kuur galaan taas xaalad iyadoon la khafiifin qiiqa gaaska lagu sii daayo, iyadoo kululaynta 3 ofC u dhexeyso 2040 iyo 2069, heerarka ozone wuxuu ka sarreeyay 8%. Haddii ay run noqoto, dhimista lagu sameeyay hirgelinta qawaaniinta qiiqa ozone waa la dhaafi doonaa; Si kale haddii loo dhigo, daloolka lakabka ozone, oo ku yaal meel 15km u jirta Antarctica, waa la weyneyn karaa.
Waad akhrisan kartaa daraasadda Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Kordhinta 3-digrii waxay khatar gelin doontaa lakabka ozone
Laga yaabee inaan khaldanahay, laakiin waxaan u maleynayaa in daraasadda aad xiriirineyso ay tixraaceyso ozone tropospheric, ma ahan lakabka ozone (stratospheric) mana dhihi doonto way yaraan doontaa, laakiin wey sii kordheysaa, taas oo ah mid xun maadaama ay sun tahay. Xaqiiqdii, cutubka maqaalkan wuxuu ku leeyahay "heerarka ozone-ka wuxuu kordhi doonaa 8%, taasoo sii ballaarin karta daloolka Antarctica." Haddii heerarka ozone kor u kacaan, maxaa godku u kordhayaa?
Waxaan ku adkaystaa, malaha waan qaldamayaa, markaasi cafi jaahilkayga. Salaan.
Isbedelka Cimilada wuxuu beddelaa imaatinka Spain ee '' shimbiro naadir ah ''